चीन औद्योगिक लोडिंग बेल्ट कन्वेयर कारखाना र आपूर्तिकर्ता मुक्सियांग
रोलर सॉर्टर कन्वेयर
फ्लेक्सिबल टेलिस्कोपिक रोलर कन्वेयर
वातावरणीय संरक्षण उपकरण
औद्योगिक लोडिंग बेल्ट कन्वेयर
एक्स्टेन्डेबल बेल्ट कन्वेयर एउटा टेलिस्कोपिंग कन्वेयर हो जुन ट्रक ट्रेलरमा लोड र अनलोडिंगका लागि एर्गोनोमिक समाधानको रूपमा विस्तार गर्दछ। यी कन्वेयरहरू प्राय: शिपिंग र प्राप्त क्षेत्रहरू, गोदामहरू, र अन्य स्थानहरूमा पाइन्छ जहाँ प्याकेजहरू र अन्य वस्तुहरू ट्रक र शिपिंग कन्टेनर भित्र र बाहिर सार्न आवश्यक हुन्छ। विस्तार योग्य, टेलिस्कोपिvey कन्वेयरहरूले डक डोरमा उत्पादकता र दक्षता सुधार गर्न सक्दछ।
टेलिस्कोपिक कन्वेयर आदर्श समाधान हो
जब तपाईंको सुविधाले हाम्रो टेलिस्कोपिक कन्भर्भरहरू मध्ये कुनै एकलाई यसको संचालनमा एकीकृत गर्दछ, तपाईंले असंख्य सुविधाहरूको आनन्द लिनुहुनेछ, समावेश सहित:
उत्पादकता:Muxiang दूरबीन वाहक अपरेटर्सको संख्या घटाएर र यी प्रक्रियाहरूमा आवश्यक प्रयास कम गर्दै लोडिंग र अनलोड गर्ने समय घटाउँछ। Muxiang दूरबीन कन्वेयर यो सजिलो विस्तार र वापसी, सहज अपरेटर नियन्त्रण, इष्टतम एर्गोनोमिक्स र विद्यमान स्थायी कन्वेयर समाधानको साथ सिमलेस एकीकरण मार्फत यसलाई पूरा गर्दछ। यसको मतलब कार्यहरू जुन सामान्यतया बहु अपरेटरहरू, विस्तारित हिड्ने समय, र असक्षम पिकि and र प्याकिंग समावेश गर्दछ अब चाँडै र सुरक्षित रूपमा केवल एक अपरेटर वा दुईको साथ - प्याकेज आकारहरूमा निर्भर गर्दै। यो छिटो रूपान्तरण र उच्च पूर्ति दर मा परिणाम।
सुरक्षा:यसको एर्गोनोमिक डिजाइनको साथ, हाम्रो टेलिस्कोपिक बूम कन्भियर कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सजिलो छ। यसले अपरेटरको लागि एर्गोनोमली अनुकूल बिन्दुमा लोडि or वा अनलोडिंग पोइन्ट राखेर दोहोर्याउने तनावका चोटहरूको साथसाथै तनाव र अन्य श्रम घाउहरूको जोखिम कम गर्दछ। यसले अन्ततः कम लागत र कम डाउनटाइम निम्त्याउँछ।
कम निष्क्रिय समय: एक विस्तार योग्य कन्वेयर समाधान बिना, धेरै समय हिंड्ने वा फोर्कलिफ्टि packages प्याकेजहरू र बक्सहरू स्थायी कन्वेयरबाट डक (वा यसको विपरित) अन्ततिर खर्च गरिन्छ, र अतिरिक्त समय वस्तुहरू कन्टेनरको भित्री क्षेत्रहरूमा सार्न (वा बाट)। यस अतिरिक्त ह्यान्डलिंग समयलाई निष्क्रिय समयको रूपमा लिइन्छ किनकि यसले प्रक्रियाको पूर्णतामा सक्रियताले योगदान दिइरहेको छैन। एक विस्तार योग्य कन्भ्यायर ट्रेलर भित्र लोडिंग वा अनलोडिंग बिन्दुको कन्वेयरलाई दायाँत गरेर यो व्यर्थ समय हटाउँछ।
बेल्ट कन्वेयरहरू के हुन्?
टेलिस्कोपिक कन्वेयर ट्रकबाट बल्क ब्याग लोडिing र अनलोड गर्नको लागि उपयुक्त। टेलिस्कोपिंग कन्वेयर एउटा समतल कन्वेयर हो जुन टेलिस्कोपिक स्लाइडर बेडहरूमा कार्य गर्दछ। तिनीहरू डकहरू प्राप्त गर्न र शिपिंगमा लोकप्रिय छन् जहाँ कन्वेयरलाई अनउन्डिंग वा लोडिंगका लागि इनबाउन्ड वा आउटबाउन्ड ट्रेलरहरूमा विस्तार गरिएको छ। यी कन्वेयरहरू बक्सहरू र ट्रकहरू र कन्टेनरहरूमा कार्टनहरू लोड गर्न प्रयोग गरियो।
हामी कसरी गुणवत्ताको ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं?
सामूहिक उत्पादन भन्दा पहिले सधैं एक पूर्व-उत्पादन नमूना;
ढुवानी अघि सधैं अन्तिम निरीक्षण;
किन तपाईं हामीबाट किन अन्य आपूर्तिकर्ताबाट खरीद गर्नुपर्छ?
२० बर्ष भन्दा बढी कन्वेयरमा फोकस गर्दै, over० भन्दा बढी पेशेवर ईन्जिनियरहरू, हजारौं भन्दा बढी वार्षिक निर्माण कन्वेयरहरू। हाम्रो कम्पनी एक उच्च-टेक इन्टरप्राइज हो जुन कन्वेयर र उपकरणमा केन्द्रित छ चीनमा आधारित र विश्वको सामना गर्दै।
हामी के सेवाहरू प्रदान गर्न सक्दछौं?
स्वीकृत डेलिभरी सर्तहरू: एफओबी, सीआईएफ, EXW Currency स्वीकार्य भुक्तानी मुद्रा: USD, CNY Pay स्वीकार्य भुक्तानी प्रकार: T / T, L / C ； भाषा बोलिने: अंग्रेजी, चिनियाँ
किन हामीले तपाईंको कम्पनी छनौट गर्नुपर्छ?
हामी धेरै वर्षको लागि स्वचालित मेसिनरीमा पेशेवर छौं, र हामी राम्रो बिक्री पछि सेवा प्रदान गर्दछौं। तपाईं हाम्रो सम्झौताको कुनै जोखिमको ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ।
तपाईसँग कस्तो प्रकारको उत्पादन छ?
टेलिस्कोपिक कन्वेयर / टेलिस्कोपिक रोलर कन्वेयर / पाels्ग्रा क्रमबद्ध मेशीन / टर्निंग बेल्ट कन्वेयर / पाना धातु / वेल्डिंग प्रक्रिया र यस्तै।
भवन निर्माण सामग्री पसल, मेशीनरी मर्मत पसल,
निर्माण प्लान्ट, खाद्य र पेय कारखाना, फार्महरू,
निर्माण कार्य, ऊर्जा र खनन
स्टेनलेस स्टील कार्बन स्टील
पीवीसी / रबर / पीयू / पीई / क्यानभास
सीमेन्स / SEW / गुमाओ / अन्य प्रसिद्ध चिनियाँ ब्रान्डहरू
०-२० मिनेट / मिनेट (समायोज्य)
आयाम (L * W * H)
H = 1M-20M W = 0.2M-2M H = 0.6M-1M (अनुकूलित गर्न सकिन्छ)
बिक्री पछि सेवा
अनलाइन / भिडियो सेवा
अघिल्लो: कन्टेनर लोड र लोड गर्नका लागि टेलिस्कोपिक बेल्ट कन्वेयर
अर्को: टेलिस्कोपिक बेल्ट कन्वेयर रबर पीभीसी कन्वेयर मेशीन
सीएनसी रोलर कन्वेयर
कन्वेयर रोलर सेट
Jual रोलर कन्वेयर
बहु रोलर कन्वेयर
स्क्रू कन्वेयर ब्लेड
ट्विन स्क्रू कन्वेयर
वाम स्क्रू कन्वेयर
टेलिस्कोपिक बेल्ट कन्वेयर रबर पीभीसी कन्वेयर मा ...
लचिलो टेलिस्कोपिक कन्वेयर लचिलो स्क्रू टेल ...
टेलिस्कोपिक बेल्ट कन्वेयर लोड र अनलोका लागि ...
No.1588, Huazhi रोड, Huaxin औद्योगिक पार्क, Qingpu जिल्ला, शंघाई, चीन